लोकतन्त्रमा कट्टर दुस्मनलाई समेत बोल्ने अवसर दिइनुपर्छ भनेर ट्वीट गर्ने इलन आफ्ना आलोचकलाई ब्लक गरिदिन्छन् « ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
काठमाडौँ — इलन मस्कको मुड फेरिएन भने दुई ? तीन महिनाभित्र ट्वीटर उनको मुठीमा हुनेछ । इलनका अनुसार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अहिले खतरामा छ । त्यसलाई जोगाउन ट्वीटरलाई आफ्नो मुठीभित्र लिन लागेको उनको भनाइ छ, त्यो परिवेश रमाइलो हुने कि भयानक ? दुनियाँमा बहस भइरहेको छ । ट्वीटरमै पनि आक्रोश छ, ‘हाम्रो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ठेक्का लिने इलन मस्क को हुन् ?’
अमेरिकी अधिकारकर्मी इभान ग्रिरको भनाइमा करिब २३ करोड सक्रिय प्रयोगकर्ता रहेको ट्वीटर विश्वका सबैभन्दा धनी व्यक्तिले खरिद गर्नुलाई खतराको घण्टीको हो । ‘सञ्चार र सन्देश प्रवाहका लागि विश्वभरका मानिस निर्भर रहने कर्पोरेसनहरूमा एकाध धनी र शक्तिशाली वर्गको आधिपत्य छ, ट्वीटर प्रसंगले त्यो जोखिम अझ बढाउँदै छ,’ उनी भन्छन्, ‘करोडौं मानिसको आवाज दबाइँदैन भनेर कुनै एक व्यक्तिले ग्यारेन्टी लिनु कति स्वाभाविक र सम्भव हो ? फेरि उनले लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता भनेका हुन् कि डोनाल्ड ट्रम्पको जस्तो स्वच्छन्दता ?ट्वीटरलाई स्वच्छन्द छाड्दा यसले अल्पसंख्यक समुदाय र विकासोन्मुख देशमा ल्याउन सक्ने भयावह स्थितिबारे इलनलाई के थाहा छ ?’ भारतका पत्रकार रवीश कुमारले आफ्नो ‘प्राइम टाइम’ मा भनेका छन्, ‘बोरामा पैसा बोकेर हिँड्नु अलग कुरा हो, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि सरकारहरूविरुद्ध संघर्ष गर्नु फरक ।’
कतिपय ट्वीटले इलनलाई कानुनी कठघरामा पनि पुर्‍याएका छन् । थाइल्यान्डको गुफामा फसेका खेलाडीहरूको उद्धार गर्न गएका एक ट्रक ड्राइभरलाई उनले पेडो गाय ९बाल यौन दुराचारी० भनेर लेखिदिए । सन् २०१९ मा यसविरुद्ध मुद्दा परेपछि उनले माफी मागेजस्तो गरे । कोभिड–१९ महामारीका बेला स्वास्थ्य मापदण्डविरुद्ध एकपछि अर्को ट्वीट गरे । कोभिड भ्याक्सिन अनिवार्य गरेकामा क्यानडाली प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोलाई इलनले हिटलरसँग तुलना गरेका थिए । तर, त्यससम्बन्धीको ट्वीट उनले डिलिट गरे । कोभिडका बेला लकडाउन जारी भएका अमेरिकाका विभिन्न ठाउँमा टेस्लाका कारखाना बन्द नगर्ने घोषणा गरे । मास्क लगाउनुपर्ने नियम पनि उल्लंघन गरे ।
ट्वीटरमा इलनले मन लगाउनुअघि नै यो कम्पनीले एब्सुलुट फ्रि–स्पिच ९निरपेक्ष अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता० माथि परीक्षण गरी मूल्य पनि चुकाइसकेको छ । त्यही अनुभवका आधारमा कम्पनीको ‘ट्रस्ट एन्ड सेफ्टी टिम’ ले थोरबहुत सुधारका काम थालेको थियो । समूहले ‘कन्टेन्ट मोडरेसन’ नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनुका साथै गलत सूचनामा ‘लेबल’ लगाउने गरेको थियो । साथै, घृणा, हिंसा वा अन्य हानिकारक गतिविधिसम्बन्धी आफ्नो नीति बारम्बार उल्लंघन गर्नेलाई प्लाटफर्मबाट निकाल्ने गरेको थियो ।
ट्वीटरले अंकुश लगाउनुपर्‍यो । कोभिड–१९ महामारीले पनि ट्वीटरलाई आफ्नो प्लाटफर्ममा लेखिएका विषयमा ‘लेबल’ लगाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिदियो । सायद त्यसैले होला– द इकोनोमिस्टले लेखेको छ– अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पनि कमजोरी हुन्छन् भन्ने कुरा सम्भवतः ट्वीटरसहित फेसबुक, इन्स्टाग्रामलगायत अन्य ठूला सामाजिक सञ्जालले अब त बुझेको हुनुपर्छ । तर, इलनले बुझेका छन्रछैनन्, उनी स्वयम्लाई पनि थाहा नहोला भन्दै विज्ञहरू मजाक गर्दैछन् ।
जनवरी २०२१ मा अमेरिकाको संसद् भवन (क्यापिटल हिल) मा भएको आक्रमण गर्न उक्साएको भन्दै ट्वीटर मात्र होइन, फेसबुक र इन्स्टाग्रामले पनि ट्रम्पलाई बन्देज लगाए । यी सञ्जालमा उनी झूटा, भ्रामक, घातक कुरा लेख्थे । कतिसम्म भने, कोभिड–१९ उत्कर्षमा छँदा यसको उपचारका लागि औलो रोगविरुद्ध प्रयोग गरिने ‘हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन’ खान सल्लाहसमेत दिए, जुन घातक हुने प्रमाणित भएको छ । फेसबुक, ट्वीटरहरूले प्रतिबन्ध लगाएपछि ट्रम्पले आफ्नै सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’ खोलेका छन् । सबैले बोल्न पाउने अधिकार रक्षा गर्ने भन्दै खोलिएको सञ्जालमा उनले आफ्ना आलोचकलाई प्रवेश दिएका छैनन् । इलन उनै ट्रम्पजस्ता उग्र र अराजक मानिसलाई पुनः ट्वीटरमा फर्काउन चाहन्छन् । लोकतन्त्रमा आफ्ना कट्टर दुस्मनलाई समेत बोल्ने अवसर दिइनुपर्छ भनेर ट्वीट गर्ने इलन आफ्ना आलोचकलाई भने के गर्छन् रु ब्लक गरिदिन्छन् ।
धनाढ्यहरूले मिडिया किन्नु नौलो नभएको र धनीले नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उपलब्ध गराउन मद्दत गर्न सक्ने एक थरी मत छ । टाइम म्यागजिनले प्रकाशन गरेका थुप्रै लेखमा इलनको ट्वीटर किन्ने योजनालाई आशावादी दृष्टिले पनि हेर्न मिल्ने विश्लेषण गरिएको छ । ‘हामीलाई यी खर्बपतिले ठूलो मिडियाको स्वामित्व लिएको मन नपर्ला । तर, यसको विकल्प के त रु ठूला मिडिया सरकारी नियन्त्रणमा हुनुभन्दा यो ठीक होइन रु’ टाइममा प्रकाशित लेखमा भनिएको छ । जसको शीर्षक नै छ– ‘बिलिनियर्स ह्याभ अल्वेज ओन्ड मिडिया’ अर्थात् मिडियाको स्वामित्व जहिले पनि अर्बपतिसँग छ ।
भारतीय युट्युबर आकाश बेनर्जी युट्युब च्यानल ‘देशभक्त’ मा व्यंग्य गर्छन्, ‘यसै पनि मिडिया किन्ने सोख धनीहरूलाई नै हुन्छ । जस्तो कि– मुकेश अम्बानी ९नेटवर्क १८०, ज्याक मा ९साउथ चाइना मर्निङ पोस्ट०, जेफ बेजोस ९वासिङ्टन पोस्ट० आदि ।’ उनी अलिक गम्भीर हुँदै भन्छन्, ‘इलनले ट्वीटरका समस्या समाधान गर्न सक्छन्, जसरी उनले विद्युतीय गाडी र रकेट निर्माण तथा यिनको पुनः प्रयोग सम्भव तुल्याए ।’
भारत, रुस, दक्षिण, कोरिया, टर्कीजस्ता देशका सरकारले सरकारलाई प्रश्न गरिएका पोस्ट र अकाउन्ट नै बन्द गरिदिन ट्वीटरलाई दबाब दिने गरेका छन् । सन् २०२१ जनवरीदेखि जुनसम्मका ६ महिनामा ट्वीटर पोस्ट हटाउन विश्वभरबाट आधिकारिक रूपमा ४३ हजार ३ सय ८७ वटा उजुरी आएको कम्पनीको ‘ट्रान्सपरेन्सी रिपोर्ट’ मा उल्लेख छ । यीमध्ये ९५ प्रतिशत अनुरोध जापान, रुस, टर्की, भारत र दक्षिण कोरियाबाट आएका थिए । यसमध्ये आधाभन्दा बढी अनुरोध स्विकार्दै पोस्ट हटाइदिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।रिपोर्टका अनुसार भारतबाट मात्रै ट्वीटरले ६ महिनामा ४ हजार ९ सय ३ वटा ‘कन्टेन्ट रिमुभल रिक्वेस्ट’ प्राप्त गरेको थियो । ‘विभिन्न सरकारले हामीलाई कन्टेन्ट हटाउन दबाब दिने र हाम्रो प्लाटफर्ममा हस्तक्षेप गर्न खोज्ने क्रम असाध्यै बढेको छ,’ रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने क्रममा ट्वीटरको ग्लोबल पब्लिक पोलिसीका उपाध्यक्ष सिनिआड म्याकस्विनीले भनेका थिए, ‘गोपनीयता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि यो खतरा हो । हामीले यसमा ध्यान दिन जरुरी छ ।’भारतले अनलाइन कन्टेन्टमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कानुन नै पारित गरेको छ । गत वर्ष किसानहरूको आन्दोलन चल्दा मोदी सरकारले अधिकारकर्मी र पत्रकारका अकाउन्ट र पोस्ट हटाउन ट्वीटरलाई दबाब दिएको थियो । सरकारको आदेश नमानेपछि दिल्लीस्थित ट्वीटरको कार्यालयमा छापासमेत मारिएको थियो । निरपेक्ष स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने इलनले सरकारहरूबाट आउने यस्ता दबाबलाई कसरी लेलान् ? चासोको विषय छ ।आफूलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षपाती बताउने इलनले यही बेला चीनमा टेस्ला कारको बजार विस्तार गर्न खोजिरहेका छन् । कोभिडका बेला अमेरिकी सरकारले लकडाउन गर्दा उनले त्यसको विरोध गरे पनि चीनले लकडाउन गर्दा टेस्लाको कारखाना चुपचाप बन्द गरे । उनी बेलाबखत चीनको आर्थिक समृद्धिको बखान पनि गर्छन् । कार बेच्न छाडेर सरकारसँग लड्नु इलनका लागि झन्झटिलो र घाँडो हुने धेरैको विश्लेषण छ ।
पछिल्ला केही दिनका गतिविधि हेर्दा इलनले ४४ बिलियन डलर तिरेर ट्वीटर किन्छन् नै भन्नेमा शंका उब्जिएको छ । हालैको एक ट्वीटमा उनले कम्पनीका प्रयोगकर्ताबारे थप जानकारी नपाएसम्म ट्वीटर किन्ने सम्झौता यथास्थिति ९होल्ड० मा रहने बताएका थिए । उनले स्पाम अकाउन्टको विवरण मागिरहेका छन् । यही बेला टेस्लाको सेयर मूल्य घटिरहेको छ । यो सम्झौता रद्द गरेमा इलनले १ अबै डरल क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने हुन्छ । सम्झौतामा अडिग रहेर इलनले यो मूल्य चुकाएनन् भने भविष्यमा दुनियाँले चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ ।